JB Myanmar Fans
Dear good dey,
September 24, 2018JBFANSTEAM
I am Georges Chaou, I am contacting regarding your relative Mr.
Arthurn , my late client who bears the same last name with you , I
have been searching for you foralongtime without any luck.
I await your response for more details.
August 28, 2018JBFANSTEAM
Hello, I am in your city. Do you like me or interested in meeting me?
I am single and ready to mingle. I got your email address from Facebook.
August 15, 2018JBFANSTEAM
My name is Erik Paolo and I am an international trade agent and representative operating here in Philippines.
I would like to know if you have the capability and will want to supply your products to the Philippines government onacontract arrangement.
There's an opportunity going on now where we can introduce your products to our government.
If you have interest, kindly reply with your complete products and price list for our review.
10B/12 Benavidez Street
Corner Trasierra Legaspi Villa
1229 Makati City Philippines.
Consultant Tel: (+63 1800 13200041
Email Disclaimer Notice: The content of this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be commercially sensitive. If you are not, or believe you may not be, the intended recipient, please advise the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies.
JB Update News
Fan တွေနဲ့ Waterloo,Ontarioမှာပျော်ပါးနေတဲ့Justin Bieber
May 25, 2018JBFANSTEAM
Fan တွေနဲ့ Waterloo,Ontarioမှာပျော်ပားကာ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ Selfileဆွဲနေတယ် Justin Bieber။
JB ကို ဘာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ပိုပိုပြီး ချစ်ကြတာလဲ ဆိုတာ
March 30, 2018JBFANSTEAM
Justin Bieber ဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်ပရိသတ်တွေ အားပေးခြင်းခံရတဲ့ International Male Artistsတွေထဲက တစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Baby သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်နဲ့ ပရိသတ်အားပေးခြင်းကို တဟုန်းထိုးလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့သူဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ပရဟိတ လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်း စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နှလုံးသားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း အချစ်ကြီးသလို အချစ်ကံခေသူတစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ လက်ရှိမှာဆိုရင် JB ဟာ Selena Gomez နဲ့ ပြန်လည်လက်တွဲခဲ့ကြတာ မကြာသေးပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Jelena တို့ရဲ့ RS ဟာ ခနတဖြုတ် Break လုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ JB ဟာ ပရိသတ် ချစ်ခင်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပါ။
ခုတစ်ခါမှာလည်း JB ဟာ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တုန်းကဆိုရင် Beverly Hills, California မှာ အိမ်ခြေမဲ့သက်ကြီးအတွဲတစ်တွဲနဲ့ အတူတူ ထိုင်ပြီး စကားစမြည်ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် JB ဟာ သူတို့ကို ဘဝရဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက် နားလည်လာအောင်ရှင်းပြပေးနေပြီး ထို အိမ်ခြေမဲ့ အတွဲကိုလည်း ဂရုစိုက်တစိုက် အားပေးစကားပြောနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။
Jn and selena
March 08, 2018JBFANSTEAM
အဆင်မပြေမှုတွေများစွာကြောင့် လမ်းခွဲနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ Justin Bieber နဲ့ Selena Gomez
What Do You Mean အဆိုတော် Justin Bieber နဲ့ Fetish သီချင်းအဆိုတော် Selena Gomez တို့ ရဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခန်းရပ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ Justin နဲ့ Selena တို့ ဟာ လတ်တစ်လောမှာ တော်တော်လေးအနေဝေးပြီး အဆက်အသွယ်လည်း သိပ်မရှိကြတော့ဘူးလို့ အတွင်းသိတစ်ယောက်က ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ(၁)ရက်နေ့ ၊ Justin ရဲ့ မွေးနေ့ တုန်းကတောင် Selena က Justin အတွက် Birthday Wish ခပ်မိုက်မိုက်လေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
" လတ်တစ်လော သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုလေးတွေတစ်ချို့ ရှိနေပြီး စကားများကြရတဲ့အထိတောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် နှစ်ဦးသဘောတူ လမ်းခွဲကြတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးကို ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ထားတဲ့ သူတို့ ရဲ့ မေတ္တာတွေကတော့ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ သေချာပေါက် သူတို့ ရဲ့ ဇာတ်လမ်းက အဆုံးမသတ်နိုင်သေးပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် စိတ်အေးအေးထားပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ လိုအပ်နေတာအမှန်ပါပဲ " လို့ အတွင်းသိက ဆိုပါတယ်။
Justin အဖေရဲ့ မင်္ဂလာပွဲပြီးတည်းက သူတို့ နှစ်ယောက်ကို အတူမတွေ့ ရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုအရှုပ်အရှင်းတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုတော့ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပဲ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ လျှောက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
Youtubeမှာကြည့်ရှုသူ 275သန်းရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ Sean Kingston, Justin Bieber - Eenie Meenie
March 07, 2018JBFANSTEAM
Justin Bieber နဲ့Sean Kingstonတို့သီဆိုထားတဲ့ Eenie Meenieသီချင်းဟာ Youtubeမှာကြည့်ရှုသူ 275သန်းရှိသွားပြီပဲ ဖစ်ပါတယ်။
သိန်း(၆၀၀၀) ကျော်တန်ကားစီးပြီး Gym သွားဆော့တဲ့ Justin Bieber
February 15, 2018JBFANSTEAM
ကမ္ဘာကျော် Pop အဆိုတော် Justin Bieber ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း(၂၀၀) ကျော်ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် Album Purpose Tour ကို နှစ်ရှည်ကြာလှည့်လည်ဖျော်ဖြေခဲ့တာကြောင့်လည်း Justin မှာ ၀င်ငွေကြွယ်ဝမှုတွေ ပိုမိုများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Justin ဟာ ပွဲတွေတက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Branded တွေကိုပဲ ၀တ်စားတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးပြီး ဖက်ရှင်ကျတာတွေကိုမှ ၀တ်တတ်တဲ့ Justin ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ က မြန်မာငွေ သိန်းခြောက်ထောင်ကျော်တန်တဲ့ အပြာရောင် Lamborghini ကားစီးပြီး Gym တစ်ခုကို လာခဲ့တာတွေ့ ရပါတယ်။
Justin စီးထားတဲ့ Yeezy ဖိနပ်ဟာလည်း $5000 တန်ဖိုးရှိပြီး မြန်မာငွေ (၆၇)သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
Justin ကတော့ Gym သွားဆော့တာတောင် ဒီလိုမျိုး တန်ဖိုးကြီးအသုံးအဆောင်တွေနဲ့ မှ အပြင်ထွက်တတ်သူပါ။ Justin ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးက Like & Share လေး လုပ်ပေးသွားပါဦးနော်။
1 Billion ကျော် ကြည့်ရှုသူရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ Justin Bieber ရဲ့ Let Me Love Üသီချင်း
February 11, 2018JBFANSTEAM
Justin Bieber featuringအနေနဲ့သီဆိုထားတဲ့ Let Me Love You သီချင်းဟာဆိုရင်Youtubeမှာ ကြည့်ရှုသူ 1ဘီလီယမ်ကျော် ရရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Justin Bieber ရဲ့ မျက်မှန်ငှားတပ်ခဲ့တဲ့ Selena Gomez
February 09, 2018JBFANSTEAM
What Do You Mean သီချင်းအဆိုတော် Justin Bieber နဲ့ Same Old Love သီချင်းအဆိုတော် Selena Gomez တို့ အချစ်ငှက်နှစ်ကောင်ကတော့ တော်တော်လေးပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတယ်ထင်ပါရဲ့ ။ Instagram Queen လေးဖြစ်တဲ့ Selena ကတော့ ချစ်သူ JB ရဲ့ အ၀တ်ဗီရိုကို ၀င်မွှေခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဘာလို့ အခုလိုပြောရတာလဲဆိုတော့ Selena ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ က Studio City ကိုသွားရင်း JB တပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်မှန်နဲ့ တစ်ပုံစံတည်းတူတဲ့ မျက်မှန်တစ်လက်ကို တပ်ထားခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Selena ဟာ Over Size ဂျင်းဂျက်ကက်တစ်ထည်ကို ၀တ်ထားပြီး ဒီဇိုင်းပုံပါတဲ့ T-Shirt တစ်ထည်နဲ့ အတူ အနက်ရောင် အသားကပ်ဘောင်းဘီတစ်ထည်တို့ ကို အထာကျကျဝတ်ထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
Justin Bieber တပ်ထားခဲ့တဲ့ မျက်မှန်
Selena နဲ့ JB ကို ချစ်တဲ့ Belieberလေးတို့ရေ Like & Share လေး လုပ်ပေးသွားပါဦးနော်။
Poo Bearနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ထုတ်ဖြစ်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ Justin Bieber
February 05, 2018JBFANSTEAM
Justin Bieberနဲ့ Poo Bearတို့ပေါင်းပြီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ထုတ်ပါမယ်လို့ Onlineမှာရော တခြားသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါပြန်နှံ့နေပါပြီ သို့ပေမဲ့ Justin Bieber ကိုယ်တိုင်ကတော့မကြေငြာသေးပေမဲ့ သေချာ နေသလိုလိုရှိနေပါပြီအဲ့ဒီသီချင်းသစ်က သူ့ရဲ့ Albumအသစ်ထဲမှာပါဝင်လာမှာလား ......သီးသန့်...အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာ မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Justinအနေနဲ့ Poo Bearနဲ့သီချင်းထုတ်ဖို့ ၂၀၁၇ ကတည်းက စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီး အခြေအနေရ ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ ထုတ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ဂျက်စတင်ဘီဘာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ ကပဲ Poo Bearရဲ့ အင်စတာဂရမ်အကောင့်ကိုFollowပြုလုပ်ခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
February 03, 2018JBFANSTEAM
Justin Bieber နဲ့Lusi Fonsi&Daddy Yunki တို့သီဆိုထားတဲ့Despacitoသီချင်းဟာဆုတွေ များစွာ ရရှိထားပြီးသာမကHot Latin Songစာရင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာပါ ရပ်တည်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းဟာ ဂျက်စတင်ဘီဘာပြန်လည်featuringအနေနဲ့ ဆိုထားတာဖြစ်ပြီး မူလ Luis Fonsi နဲ့Daddy Yunkiတို့သီဆိုထားတဲ့ဟာထက်ဆုတွေ အများအပြား အဆပေါင်းများစွာ ရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Justin Bieber ကို မုန်းတဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုပြောကြသေးရဲ့"Despacitoကအောင်မြင်ပြီးသားပါJB ဝင်ဆိုလို့အောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြသေးရဲ့" အခုတော့သတ်သေထူလိုက်ပါပြီဂျက်စတင်ဘီဘာက Remix က ပိုပြီ ဆုတွေ အများအပြားရထားပြီဆိုတာ။
ဆယ်လီနာဂိုးမက်ဇ် ဘာလို့ ဂျက်စတင်ကိုပြန်အကပ်ခံတာလဲ။
January 24, 2018JBFANSTEAM
ဂျက်စတင် နဲ့ ဆယ်လီနာတို့ နှစ်ဦး ပြန်တွဲနေပြီလား ဆိုတော့ People မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆယ်လီနာ့ အတွင်းလူတစ်ဦး ဖြေထားတာက အဟုတ်ပါတဲ့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးက အချစ်ဦးတွေ ဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး ဖန်တွေမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေး အနိမ့်အမြင့်တွေကို အချိန်အတော်ကြာခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ဦး ဘုရားကျောင်း နှစ်ကြိမ် အတူတက်တာနဲ့ ဟော်ကီကွင်း အတူသွားတာတို့ကို တွေ့ရပြီးနောက်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်က အဟုတ်ကို နီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ power couple အဖြစ် public မှာ တွေ့ရပါပြီ။ ဒီလို ပြန်တွဲဖြစ်ဖို့ ဂျက်စတင်က ဆယ်လီနာ့ဆီကို အသာအယာတိုးခဲ့တာပါ။
ဆယ်လီနာက ဂျက်စတင်ကို ဘာလို့ dating လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့လဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး People မဂ္ဂဇင်းမှာ ပြောထားတာက "ဂျက်စတင်က ဆယ်လီနာ့ ရည်းစားဦးလေ။ ဆယ်လီနာ့ နှလုံးသားမှာလည်း ဂျက်စတင်ကို နေရာတစ်ခု ပေးထားမှာပါ။ ဆယ်လီနာမှာ တစ်နေ့မှာ အခြေအနေတွေ ကောင်းလာမှာပါဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ထိန်းထားတာလေ။" ဆယ်လီနာက ဂျက်စတင်ကို အမြဲအကောင်းမြင်ပေးတယ်ဆိုတာ သူတို့နှစ်ယောက် ကြိုက်ကတည်း မြင်ရသလို ဒါကလည်း ဆယ်လီနာက ဂျက်စတင်နဲ့ အတူအချိန်ပေး ဖြတ်သန်းဖို့ သာမက လူမြင်ကွင်းမှာပါ သွားလာဖို့ ထက်ထက်သန်သန် ဖြစ်နေတာ ကြည့်လည်း သိကြမှာပါ။ ဂျက်စတင်ကလည်း အရင်ထက် ရင့်ကျက်မှုနဲ့ ဆယ်လီနာ့ကို တွေ့ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဂျက်စတင် ရဲ့ ကစားဖော်တစ်ဦးက "သူတို့နှစ်ယောက်က အချိန်ကောင်းကို အတူဖြစ်သန်းနေပါတယ်။ နှစ်ဦးလုံးက အခြားသူတွေကို ရှိတယ်တောင် မထင်ပဲ ပျော်နေတာများ နောင်မတွေ့ရမှာ ကြနေတာပဲဗျာ" လို့ ပြောပါတယ်။
"အချိန်အတူဖြုန်း ရတာက နှစ်ယောက်လုံးကို အရမ်းပျော်စေပုံပါပဲ။ ဂျက်စတင်အတွက် ဆယ်လီနာနဲ့ ယှဉ်လို့ရတဲ့သူ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်လီနာကပဲ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ တွေးထားတယ်လေ။ ဆယ်လီနာက အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ တန်တယ်ဆိုတာကို အသိတရားရ ရင့်ကျက်တဲ့ပုံပါ။"
Ref : Marie Clarie
Justin Bieber နဲ့ ရုပ်ချင်းတူချင်လ်ို့ခွဲစိတ်ခဲ့သူ
January 17, 2018JBFANSTEAM
Justin Beiber နဲ့ တူချင်လို့ Toby Sheldon ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ ဒေါ်လာ 1 သိန်း အကုန်အကျခံ ခွဲစိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ဒီလောက်ပိုက်ဆံသုံးခဲ့ပြီးမှ မေးရိုးတွေရှည်ကာ ပိုတောင် ရုပ်ဆိုးသွားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ Psycologyပြောရမလား ဘာလားပဲပေါ့နော် ထားပါတော့ သူ ငွေကုန်ခံပြီ့းဘာသာလုပ်တာပါပဲလေ သိစေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Selena Gomez အကြောင်း သီချင်းရေးနေတဲ့ Justin Bieber
January 13, 2018JBFANSTEAM
Justin Bieber နဲ့ Selena Gomez တို့ကတော့ နာမည်ကျော် ပြန်ပေါင်းထုပ်စုံတွဲပါ။သူတို့ နှစ် ဦးကို ပရိသတ်တွေကလည်း လက်ခံသဘောတူခဲ့ကြတာပါ။လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာတော့ ဘယ်လို မှ ပြန်ပေါင်းမထုပ်တော့ဘူးလို့ ပရိသတ်တွေက ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ပြန်တွဲနေကြ ပါတ ယ်။လမ်းခွဲပြီးမှ ပြန်ဆက်ကြတဲ့ သူတို့စုံတွဲဟာ အခုဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်ကြိုးတွေ အရမ်းကို ခိုင်မြဲနေကြပါတယ်။
ဘယ်လောက်တောင်ခိုင်မြဲနေသလဲ ဆိုရင်တော့ JB က ချစ်သူ Selena Gomez အတွက် သီချင်း ရေးစပ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။သီချင်းကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ် အေ ကြာင်း လို့ နီးစပ်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ ရဲ့ အပြော အရ သိရပါတယ်။စတူဒီယိုကို ဘယ်တော့လော က် ရောက်မလဲဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး။
JB တစ်ယောက် အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ ချစ်သူလေးကြောင့်အရမ်းကို ဂုဏ်ယူနေတယ်လို့ JB ရဲ့ အ သိုင်းအ၀ိုင်းဆီကနေ သတင်းတွေ ပြန်ကြားနေရပါတယ်။Selena Gomez က သူမရဲ့ ကျန်း မာေ ရးအခက်အခဲကို ကျော်လွှားခဲ့ပြီး စိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေတာ၊ယုံကြည်စိတ် ပြင်းထန်နေတာလေးတွေကို JB တစ်ယောက် အရမ်းကြွေနေပါတယ်။
တကယ်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရည်ရွယ်ပြီး စပ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေ အရင်ကလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ Selena Gomez ရဲ့ The Heart Wants What It Wants ထဲက စာသားတွေက JB ကို ရည်စူးထားတာပါ။JB ကလည်း The Ellen Show မှာတုန်း က သူ့ရဲ့ အယ်ဘမ် Purpose ထဲက သီချင်း(၃)ပုဒ်ဟာ Selena အကြောင်းပါလို့ ပြောခဲ့ ဖူးပါတယ်။
2017 Top Certifiedထဲမှာ I'm The One ပါဝင်နေ
January 04, 2018JBFANSTEAM
2017 Top Certified ထဲမှာဂျက်စတင်ဘီဘာပါဝင်သီဆိုထားတဲ I'm The One Songက ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။R&B/Hip Hop Songဖြစ်ပြီးRiaa Goldအနေနဲ့ရော Platinum နဲ့ပါဆုတွေကိုရရှိထားသေးပါတယ်။အခုလာမဲ့၂၀၁၈ ရဲ့Global Awardမှာလည်း ရရှိဦးမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
Justin Bieber ၏sex ပုံများ 😜
နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်မင်းသားWillian Smithရဲ့ သားဖြစ်သူ Jaden Smithနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Justin Bieber
Justin Bieber ဟာပြီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်းကပဲ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်း Jaden Smith နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ ကြတာပါ။Jaden Smithဟာဆိုရင် ကမ္ဘာကျော် သရ...
Justin Bieberဆိုတာ ဒီလို လူမျိုး ဟဲ..ဟဲ..
Justin BieberဆိုတာFanတွေကို တအား ဂရုစိုက်တဲ့သူ သူ့ကို Fanတွေစိတ်ဆိုးမှာ တအားစိုးရိမ်တဲ့သူ အမြဲ သူ့ Fanတွေရဲ့ အချစ်ကိုလေးစားသူ ..သူဟ...
Justin Bieber တွဲခဲ့ဖူးသမျှ ရည်းစား အချို့
ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်ဘုရင် Justin Bieber ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းက ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားပြီး လက်ရှိအထိလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်နေဆဲ အဆိုတော်တစ်ေ...
Justin Bieber ဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်ပရိသတ်တွေ အားပေးခြင်းခံရတဲ့ International Male Artistsတွေထဲက တစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Ba...
သင်မသိသေးတဲ့ Justin Bieber အကြောင်း တချို့
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်းဟာ Justin ကို ပိုချစ် ပို၍ မမုန်းကြပါဘူး။အဲ့တာကဟုတ်တယ်မလားဗျ ပြီးတော့ Justin Bieber ငယ် ငယ်တုန်းက အကြိူက်ဆုံ...
Justin Bieberပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ကြော်ငြာများနှင့်ဇာတ်ဝင်ခန်းများ။Facebook Planနဲ့ကြည့်ရသည်။
ကမ္ဘာကျော် Pop အဆိုတော် Justin Bieber ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း(၂၀၀) ကျော်ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် Album Purpose Tou...
What Do You Mean သီချင်းအဆိုတော် Justin Bieber နဲ့ Same Old Love သီချင်းအဆိုတော် Selena Gomez တို့ အချစ်ငှက်နှစ်ကောင်ကတော့ တော်တော်လေးပေ...
ဂျက်စတင် နဲ့ ဆယ်လီနာတို့ နှစ်ဦး ပြန်တွဲနေပြီလား ဆိုတော့ People မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆယ်လီနာ့ အတွင်းလူတစ်ဦး ဖြေထားတာက အဟုတ်ပါတဲ့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးက ...
Justin Bieber Myanmr Fans Official Wesite